Ogwu iba ọchanaanya - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Ogwu iba ọchanaanya
ḷba ọchanaanya nke mbụ nwere ọgwụ eji egbochi ya. Egosiri n'ọna arụ orụ ruo pasent 95 ma n'arụ ọrụ n'ime ahụ mmadụ ruo afo iri na ise. Ekwesịrị ịgba ya mmadụ ugboro abụọ mgbe ọdị naanị otu afo. Ana eji ntụtụ agbanye ya mmadụ n'ime ahụ. Ótú mba ụwa akpọrọ Wọld Helt Ọganaịzeshọn (WHO) n'ahụ maka ahụike kwuru ka ejiri ya n'eme ihe n'ụwa niile ebe onwere ike inweta ndị mmadụ. Mana ebe ọtụtụ ndị nwere ya anaghị atụ aro ka agbaa ya n'ihina ụmụaka ndị amụrụ ebe ahụ nwere ike iguzogide ya mgbe amụrụ ha nke na ha agaghị enwe ike nweta ya. Ótú n'ahụ maka mgbochi ọria akpọrọ Center for Disease Control and Prevention (CDC) kwuru n'ọdị mkpa ịgba okenye ma ụmụntakịrị ndị nwere ike inweta ya. Enwechaghị ihe n'esochi ya mgbe mmadụ gbasịrị ya . Ihe dịka pasent 15 n'enwe mgbu n'akụkụ ebe agbara ha ọgwụ, ebe ọkara bụ ndị okenye.Ọtụtụ ọgwụ maka ịba ọchananya n'enwe nje ndị dị ndụ, ebe ndịọzọ n'enwe nje esighị ike.Naanị ụmụnwanyị dị ime na ndị ahụ ha esichaghị ike iguzogide ọrịa nwere ike iji ọgwu nke a esighi ike eme ihe. Enwere ngwakọta ọgwụ nke ịba ochananya nke mbụ na nke abụọ maọbụ ọgwụ ịba.
N'afọ 1991, ka ebu uzọ chọpụta ọgwụ ịba ọchananya nke mbụ ma nye ikike ka ewere ya n'eme ihe na mba Urop na Unaịted Steeti na afọ 1995. Ótú mba ụwa akpọrọ Wọld Helt Ọganaịzeshọn ji ya mee ihe dịka ọgwụ ha ga-eji eme ihe nke kasị mkpa maka nlekọta ahụike. Na mba Unaịted Steeti ọbụ dọla 50 maọbụ 100.Àtụ:Drugbox
Wefụtàrà ya shí https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Ogwu_iba_ọchanaanya&oldid=64923